नयाँ मन्त्रीमा सहमति जुट्यो, सबैलाई चकित पर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार सपथ लिँदै ! – GALAXY
नयाँ मन्त्रीमा सहमति जुट्यो, सबैलाई चकित पर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार सपथ लिँदै !
काठमाडौँ ।सत्तारुढ गठबन्धनीचमा बोल्ड सहमती जुटेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति जुटेको छ । अब कांग्रेस सांसद नारायण खड्का मन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको छ ।